Al Shabaab oo sheegtay in ay dileen 5 ka mid ahaa Ciidanka Jabuuti – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wararka naga soo gaaraya degmada Jalalaqsi ee Gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan in dagaalamayaalka tirsan Ururka Al-Shabaab ay weerar madaafiic ah ku qaadeen Saldhig ay ciidamada Jabuuti oo ka mid ah AMISOM ku leeyihiin degmadaas.
Weerarkaas oo dhaliyay khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah ayaa dad ku sugan degmada Jalalqsi waxa ay sheegeen in uu ahaa mid loo adeegsaday madaafiic lagu soo tuuray Saldhiga ciidamada Jabuuti ee degmada Jalalaqsi.
In kastoo aan weli la ogeyn khasaaraa rasmiga ah ee ka dhashay weerarkaasi madaafiicda ah ayaa waxaa sheegtay Al-Shabaab,iyaga oo sheegay in weerar madaafiic ah ay ku qaadeen Saldhiga ciidamada Jabuuti,isla markaana ay ku dileen 5 ka mid ah askarta Jabuuti kuwo kalena ay ku dhaawaceen.
Mas’uuliyiinta Maamulka degmada Jalalaqsi iyo Saraakiisha ciidamada Dwladda weli intaba kama hadlin weerarkaas madaafiicda ah oo Al-Shabaab ku qaadeen Saldhig ay ciidamada Jabuuti oo ka mid ah AMISOM ku leeyihiin degmada Jalalaqsi ee Gobolka Hiiraan.